Crvenjeti - Kroatiska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: crvenjeti (Kroatiska - Burmesiska)
မစိုးရိမ်နှင့်။ ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ရ။ မျက်နှာမပျက်နှင့်။ အရှက်ကွဲခြင်းကို မခံရ။ အသက် ငယ်စဉ်အခါ ခံရသော ရှက်ကြောက်ခြင်းကို မေ့လျော့ လိမ့်မည်။ မုတ်ဆိုးမဖြစ်၍ ခံရသော ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို နောက် တဖန် မအောက်မေ့ရ။
Nek' se postide to gnusobu poèinie, no oni vie ne znaju to je stid, ne umiju se vie crvenjeti. I zato æe popadati s onima to padaju, sruit æe se kad stanem kanjavati" - govori Jahve.
သူတို့သည် ရွံရှာဘွယ်သော အမှုကိုပြုပြီးမှ ရှောက်ကြသလော။ အလျှင်းမရှက်ကြ။ မျက်နှာမပျက် ကြ။ ထိုကြောင့်၊ တယောက်နောက်တယောက် လဲကြ လိမ့်မည်။ ငါစစ်ကြောသောအခါ နှိမ့်ချခြင်းသို့ ရောက်ကြ လိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
Neka se postide to gnusobu poèinie, no oni vie ne znaju to je stid, ne umiju se vie crvenjeti. Zato æe popadati s onima to padaju, sruit æe se kad stanem kanjavati" - govori Jahve.
သူတို့သည် ရွံရှာ ဘွယ်သောအမှုကို ပြုပြီးမှ ရှက်ကြ သလော။ အလျှင်းမရှက်ကြ။ မျက်နှာမပျက်တတ်ကြ။ ထိုကြောင့်၊ တယောက်နောက် တယောက်လဲကြလိမ့်မည်။ ငါစစ်ကြောသောအခါ နှိမ့်ချခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
onore (Franska>Engelska)dula dulaan tungkol sa masamang bisyo (Tagalog>Engelska)leveransstruktur (Svenska>Engelska)na sala (Portugisiska>Turkiska)kahulugan salitang pagtungo (Tagalog>Engelska)pieds noirs (Franska>Vietnamesiska)primerljiva (Slovenska>Tyska)pokušajima (Serbiska>Tyska)교감신경계통 (Koreanska>Spanska)concluded (Engelska>Walesiska)베르노니아 (Koreanska>Engelska)videÓ benevezÉse (Ungerska>Engelska)corrective measures (Engelska>Holländska)kya aap ne doctor ko dekhya (Hindi>Engelska)bufo (Grekiska>Tyska)taire (Franska>Rumänska)sopravalutati (Italienska>Engelska)ang tunay na buhay ni tony perez (Tagalog>Engelska)angos (Engelska>Franska)bangsat (Malajiska>Kinesiska (förenklad))emotioneel (Holländska>Engelska)kasvihuonekasvit (Finska>Engelska)kasalukuyang pagsasalin ng ni (Tagalog>Engelska)ซินเทติกเปปไทด์ (Thai>Engelska)пять (Ryska>Engelska)